पाँच डलरकाे नाेट – मझेरी डट कम
by केडी रेम्नीसीङ
कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै स्कुल छोडी एकजना छिमेकी दाईलाई पछ्याएर गाउँदेखि उकालो हिँडेको ऊ अर्थात शिरिषे रेम्नीसीङ ठिक दोस्रो दिनको वेलुका लुक्लामा पाउँछ आपूmलाई । झोलामा एक भारी सपना खाँदेर बोकेको १३ वर्षे किशोर छक्क पर्छ लुक्लाको वस्ती देखेर । सबभन्दा त हुतहुती सुरु हुन्छ उसको मनभित्र कि कहिले भोली विहान हुन्छ र त्यो परको एयरपोर्टमा प्लेनहरु आको हेर्न पाउनु । वेलुकी नै सँगैको दाईले घुमाए उनलाई तामाङ टोल, पासाङल्हामु गेटदेखि निकोल निक्की हस्पिटलसम्म । आकाशमा मात्र कहिलेकाँही देखेको प्लेन आप्mनै आँखाअघि पहिलोपटक देखे उनले लुक्ला एयरपोर्टमा । दाईका केही चिनजानका साथी भेटिए बजारमा, त्यसमध्येमा भेटियो एउटा शेर्पा केटो, जो आजको तीन दिनपछि ट्रेकिङ जाँदैछन् बेसक्याम्पतिर । उसको पद पनि शेर्पा नै रे । त्यो जातको पनि र पदको पनि शेर्पाले उनीहरुको ग्रुपलाई भारी बोक्ने पोर्टर चाहिराखेको बतायो । अनि सँगैको दाईलाई लाने पनि पक्का गरायो । तर शिरिषेलाई एकपल्ट राम्रोसँग नियाल्यो तर लाने मन गरेन ।
उनीहरु बासस्थान फर्किए र दाईले त्यो होटलको मालिकसँग कुरा मिलाए कि तीन दिनपछि टे«किङ जाने पक्का भयो, गाइडसँग पेश्की मागेर दिएको सम्मलाई उधारो बास र खाना दिनुप¥यो । साहुजीले दुवैलाई हेरेनन् मात्र दाईलाई हेरे र भने, ‘तर वैमान गरेर भाग्ने चाहीँ होइन नि फेरी!’ दाइले विश्वास दिलाए, ‘कहाँ त्यस्तो गर्नु हौ दाई, किरातीको छोरो पो त वचनको पक्का हुन्छन् ।’ साहुजी मुस्काए र भने, ‘एकलव्य जस्तै?’ अलमलिए दाई, ‘को एकलव्य दाई? त्यसले केही वेइमान गरेको छ कि के हो तपाईँसँग?’ साहुजी हतारको भावमा हाँस्दै किचनतिर हराए । के था ७ कक्षासम्म पढेका उनीहरुलाई कि एकलव्य गुरुलाई दिएको आप्mनो वचन पुरा गर्न हाँसी–हाँसी आप्mनो बुढीऔँला काटेर गुरु दक्षिणा दिने किराती राजकुमार थिए भनेर ।
भोली विहान भयो, साइरन बज्यो एयरपोर्टको, मान्छेहरु भेलजस्तै तँछाँड र मछाँड गर्दै एयरपोर्टतिर जान थाले । उनीहरु पनि भीँडको एउटा कुनामा मिलेर त्यतै लागे । एयरपोर्ट माथीबाट हेर्दाहेर्दै पर डाँडाबाट एउटा प्लेन सानो चिलजस्तै गरी ताकेर आयो । केही पलमै प्लेन ल्याण्ड भयो । एक दुई नेपाली र पन्ध्र सोह्र विदेशी निस्किए भित्रबाट । कुइरेहरु क्यामेरा निकालेर फोटो खिच्न थाले, तर प्रहरीले तिनीहरुलाई कुखरा हुलेजस्तै खरखर गर्दै एयरपोर्ट छोडाए । उनीहरुले यो निरन्तर दृष्य निरन्तर दुई घण्टा नियाले । अघिका भीडहरुमध्ये केही भाग्यमानीहरु कुइरेको दुई दुई वेडिङ बोकेर फर्किए । केही आजलाई रित्तै फर्किए । केही भने अझै केही आश बोकेर यताउता गरिरहे । ती दुई पनि खाना खान भनी होटलतिरै फर्किन लागे । फर्किदैँ गर्दा एकजना कुइरेले बाटो छेके शिरिषेको । शिरिषेलाई आशाका तरंगले तर्साए, उनले सुनेका थिए कि कुइरेले सानो गरिव बच्चालाई त स्पोन्सर गर्छ रे भनेर । नेपाली गाइडको माध्यमबाट नाम सोधियो र सोधियो उमेर । उनले नाम र उमेर त भने नसोधिएको कक्षा पनि भनीदिए, ‘सेभेन क्लास’ अनि मनमनै भने, ‘आजसम्म हरेक साल कक्षा प्रथम ।’ उनको फोटो खिचियो, डायरीमा केही लेखियो अनि उनलाई दिइयो हरियो नोट । सपना हरायो कुइरोजस्तो कपाल भएको कुइरेसँगै कुहिरोभित्रै । त्यो नोट पाँच डलरको रे, दाइले भने अनुसार ।
त्यस दिन विहानभरी कुइरेहरु आए र दिउँसो समानहरुमात्र बोकेको प्लेन आयो, तवसम्म दुई भाई तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्ट आसपासमै बसिरहेका थिए । उनीहरुले दिउँसोको लागि चाउचाउको कार्टुन बोक्ने काम पाए । कार्टुनको खोलमा ‘बुइपाली’ र ‘भुपाल साहूजी’ लेखेका कार्टुनहरुको थुप्रोबाट प्रतिपटक दुई दुई गरेर दिनभर करिव ८०÷९० कार्टुन बोकेपछि हिसाव भयो प्रति कार्टुन पाँच रुपैयाँको दरले । ‘भुपाल साहुजी’ ले दिएको अलि चित्त बुझेन, किनकी अलि टाढा थियो बुइपालीको भन्दा । चित्त बुझाउने बाहेक कुनै अरु विकल्प नभएकोले उनीहरु लागे बासस्थानतर्पm । वेलुकी हिसाव गरेको उनीहरु प्रत्येकको कमाई भन्दा कुइरेले दिएको पाँच डलर बढी भयो ।
वेलुकीको खाना खाँदै गर्दा दाईले सम्झाए उनलाई, ‘तिमी सानै भएकोले कसैले ट्रेकिङ लाँदैनन् । ऋणमात्र बढ्छ यहाँ, बरु नाम्चे जाऊ, पर्सि शनिवार हाट लाग्छ, त्यहाँबाट कसै न कसैले काम गर्न लान्छन् ।’ शिरिषेलाई बोध भइसकेको थियो कि उनलाई ट्रेकिङ पनि लगिन्न र कुइरेले पनि लाँदैन । दिनदिनै उनको फोटा पनि खिचिन्न, नत्र त पाँच डलरले त पुग्थ्यो होला । उनले भने, ‘बरु म त गाउँ नै फर्किन्छु, नाम्चे आउनेहरु फर्किदाँ सुकिला मुकिला भएर आको देख्दा मात्र रहर पलाउने रैछ । अनि नाम्चेमा कसरी काम खोज्ने र? नाम्चे जाने बाटो चाँही कता हो?’ गाउँदेखि फकाएर ल्याएको ‘भाई’ फर्केर जाऊ त कसरी भन्थे, ‘नाम्चे जाने बाटो त त्यही हिजो हामी गको पासाङल्हामु गेटतिरबाट बाटै बाटो उता हो, नाम्चे बजारमा गएर एक ठाउँमा झोलासँग बसिराख्ने हो, लान्छन् । बरु पैसा पुग्दैन भने त्यो पाँच डलर तिरी राख्नु यहाँ ।’ उनको सुझाव शिरोधार्य गर्न अन्कनाए शिरिषे, ‘बरु गएर पढ्नु पो वेश होला ।’ ‘पढेर कसले के ग¥या छ र? अगाडी पढेका दाईहरुलाई हेर न, कोही आठ कक्षा कोही दश कक्षा पढेर पनि नाम्चे नै आएर भारी बोक्ने र ढुंगा पूmटाउने काम नै गरेर गाउँमा प्रगति ग¥या छन् ।’ चलेको यथार्थता पोखाए दाईले । ‘अव एकदुई दिनमा सोँच्नुपर्ला ’ भनेर टुंग्याए कुरा ।
विहान उठ्दा शिरिषे ओछ्यानमा थिएनन् । दाईले सोचे कि कतै बाहिर घुम्न गयो भनेर । भरे रातिसम्म नआएपछि घर फर्केको निधो गरे । तर शिरिषे विहान सवेरै पासाङल्हामु गेट काटेर फाक्दिङतिर पुगिसकेका थिए । एकलव्यजस्तो मान्छेको संज्ञा पाएका किरातिको छोरो तीन छाकको उधारो नतिरी भागिसकेका थिए । उनी निरन्तर हिँडेर नाम्चे पुगे, त्यस दिन बास बस्न कुनै समस्या भएन । बाटामा भेटेका थिए एक होटलका साहुजी र उनले बोकाएका थिए केही समान । वेलुकी पनि सोही साहुले होटेलमा लगेर भाँडा माझ्ने काम मिलाइदिए, छाक ट¥यो र रात ट¥यो ।
भोलीपल्ट विहानै उनी नाम्चे बजारतिर लागे मान्छेको हुलसँगै । अनि बसे एक ठाउँमा, जहाँ उजस्तै अरु दुई साथी पनि थिए, चिनेकैहरु । साथीहरुसँग कुरा गर्दै बसिराखेको बेला एकजना साहुजी उनीहरु सामु आए तर त्यो शेर्पा अनुहारका थिएनन् । उसले तीनैजनालाई गौर गरे र रोजे सबभन्दा ठूलोलाई, ‘तिमी मसँग जान्छौ, होटलमा काम गर्न?’ शिरिषेले थाहा पाए कि नाम्चेमा साहुजी क्षेत्री पनि रहेछन् भनेर । ‘कुन ठाउँ दाई?’ सोधे त्यो साथीले । ‘गोक्योमा’ जवाफ आयो सुनेको तर नपुगेको ठाउँको नाममा । ‘हुन्छ, यो पनि मेरो साथी हो ।’ केही आशाका साथ जवाफ दिए । ‘कति वर्षका भयौ तिमीहरु?’ जवाफमा त्यो साथी बोले, ‘म १७, ऊ चाँही १६ वर्ष ।’ केही छिन हराएर फेरी फर्किदाँ त्यो साहुजीले अर्को एक साहुनी साथमा ल्याए । त्यो साहुनी भने शेर्पा नै थिई, लाने भए दुवैलाई एकएक बाँडेर, बाँकी रहे शिरिषे एक्लै । उसलाई थाहा भयो कि उसको उमेरले गर्दा उसलाई छोडियो । उसलाई अलि उमेर बढाउन मन लाग्यो ।
वेलुकीसम्म उसलाई लाने मान्छे कोही आएनन् सवैले उमेर सोधेर छोडिदिए । अन्तमा साँझपख एकजना युवा उमेरका किराति अनुहारका साहुजी आए र सोधे उसको उमेर, भनीदिए ‘पन्ध्र वर्ष’ दुई वर्ष बढाएर । ‘हेर्दा त देखिन्न’ भन्दै लगे उनले एक होटेलमा र खाजा खुवाए अनि लगे थामे भन्ने ठाउँतिर । गएर बुझ्दा ती उनलाई लाने केटो त उनकै गाउँतिरका दाजु नै पो रहेछन् । यति माउन्टेन होमका एक कुक । अनि नवआगन्तुक शिरिषेको पद थियो, मस्काउने अनि चम्काउने । उनले आप्mनो तलव सोधे डलरमा, ‘करिव पन्ध्र डलर’ को जवाफ आयो । सोचे, ‘अघि नै उमेर बीस वर्ष भनेको भए त बीस डलर नै हुन्थ्यो होला ।’
विहान वेलुका भाँडा माझ्ने र दिउँसो चौँरीको गोवर टिप्न नांगा चउरतिर जाँदै वित्यो चार वर्ष, त्यो थामे उपत्यकामा । यस बिचमा उनी पूर्वतिर नाम्चे बजार धाउन पोख्त भए, पश्चिमतिर च्छो रोल्पा तालसम्म पुगेर ट्रेकिङका भारी…… पास गराउन पनि सक्ने भए । उनको तलव पनि बढेर ४० डलर पुगिसक्यो । काम पनि खाना सर्भिस गर्नेसम्म पुगे । तर विर्सिए पुरै, गाउँलाई, घरलाई ।
चार वर्षपछि घर आए शिरिषे, हिरो बनेर । नाम्चेमा टिवेटनको पसलबाट राम्रै सपिङ गरेर सक्दो राम्रो बनेर केही रुपैँया र केही डलर बोकेर उही पुरानो ठाउँ लुक्ला पुगे । त्यहाँ पुगेर सबै डलर चलेको भाउमा साटे । तर पाँच डलर गोजीमै थियो साटेनन् । चिनजानकै बजारमा चिनजानका थुप्रै साथी भेटिए, हान्निए उनीहरुसँगै पुल÷स्नुकर हाउस तिर । उनलाई स्नुकर खेल्न त्यति आएन तर सिके, सिकेपछि नजान्ने कुरै भएन । केही दिनको दिनचर्या नै भो उसको लागि स्नुकर तिर धाउनु र वेलुकी म.म. खान तामाङ टोलतिर जानु ।
केही दिनपछि घरतिरको बाटो समाते उनले । घरपनि पुगे । पुसको महिना, सबैजना कुलुङ समुदायको चाक्चाकुर पर्वमा व्यस्त थिए । केही वर्षअघिमात्र सुरु भएको सो चाड मनाउन सबै जना परदेशीहरु गाउँ फर्किने हुनाले गाउँ रमाइलो थियो । शिरिषे बजार गयो, रमाइलो भयो रोटेपिङमा भेटिएकी एक जना बाटोमुनीकी सामान्य चिनजानकी नानीले जाले रुमाल दिए पसिना पुछ्ने निहुमा र फिर्ता लिन मानिन । जीवनभरको लागि पसिना पुछिदिने वाचा गरे जस्तै लाग्यो उनलाई र गोजीमा राखे । तीन दिनको चाक्चाकुर मेला विषेश भयो उनको लागि । गोरुको मासुको म.म. खान पाए, सोचेभन्दा बढी खर्च गर्न पाए, बाटोमुन्तीरकी नानीका कारण । गाउँमा विजुली निकालिएको रहेछ, त्यसको उद्घाटन पनि चाक्चाकुरमै गरियो । गाउँबाट मट्टीतेल विस्थापित हुँदै थियो भने गाउँलेको मुहार पनि मट्टीतेलको वत्तीको जस्तो धिमिलोबाट विजुलीजस्तै चम्किएको देखियो ।
विजुली निकाल्ने बेलामा परेको ऋण तिर्नलाई आमाको आग्रहलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेर तिरे, उनको परिवारले बल्ल आफ्नो कमाईको विजुली बाल्न पाए । उसको एक महिनाको लामो विदा सकिएकोले उनी फर्के थामेतिर । तर उनलाई नाम्चे पुग्दा नपुग्दै के विचार आयो कुन्नी उनी पुरानो थामेतिर जानै सकेनन् । बाटोतिर कामहरुको खोजी गरे, सकेसम्म ठेक्का पट्टा खोज्ने उनको योजना सफल भयो । ढुंगा फूटाउने र ओसार्ने ठेक्का पाए । अरु केही साथिहरुलाई समेत जम्मा पारेर उनीहरु ठेक्का पट्टामा लागे । यो पछि त्यो, त्यो पछि त्यो गर्दै काम गर्दै गएपछि कमाई राम्रै हुने भयो । पाँच डलर भने उसकै साथमै थियो ।
गाउँघरतिर बोलाइएकोले गाउँतिर गईराख्नु उनी गाउँतिर आए नै । बोलाइएको माथि पुरानो जाले रुमालको माया पनि उनको देब्रे छातीमा धड्किएकै थियो जसले उसलाई चुम्बकले फलाम बनाइदियो । यो पाली फेरी अर्को नयाँ योजना आएको रहेछ गाउँमा, एक खुला दिशा मुक्त भन्ने । उसले अरु थप केही नबुझेपनि प्रत्येक घरमा चर्पी बनाउनुपर्ने भन्ने बुझे । यो चर्पी बनाउने कुरा त ठूलो भएन तर अचम्म उसलाई के लाग्यो भने अव सुँगुरको चारो के ले पु¥याउने त? तर यो कुरामा भने उनी खुशी भए कि लौरो हल्लाउदै मान्छे नआउँलाकि भन्दै डराइराख्नु भने पर्ने छैन । उसले केही हजारको खर्च र केही खेतालाको सहयोगमा केही दिनमै चर्पी बनाए, आउदो चाक्चाकुरमा यो गाउँलाई खुलादिशामुक्त घोषणा गर्ने हल्ला सुने । एकदिन गाउँको पुरानो साथि जो गाउँकै स्कुलमा मास्टर भैरहेका थिए, उनलाई सोधे यो खुला दिशामुक्तको अर्थ के हो भनेर । साथिले सम्झाए, खुला ठाउँमा दिशा नगर्नु या नदेखिनु हो भनेर । उनी अन्यौलमा परे, अनि पहिला पनि खुला ठाउँमा कहाँ दिशा गरिन्थ्यो र? बाउ बाजेहरु त मेलोतिर कतै दिशा लागेपनि पाखोमा गर्न हुन्न घरमा लानुपर्छ, चारो हो भनेर खुला ठाउँमा कहिल्यै गर्थेनन् । उनको कुरामा हाँसो मच्चियो र साथिले सकेसम्म सम्झायो, उसले कुरा त सम्झि नै सकेको थियो ।
यो बिचमा उनी पुरानो जाले रुमाल पु¥याउन नानीकोमा पुगे तर कहिल्यै फिर्ता दिन सकेनन्, अथवा लिन सकिनन् नानीले । उ नाम्चेमा तिवेतनको लुगा र लुक्लामा मल्टिमिडिया चाइनिज मोबाइल सेट किनेर नानीलाई ल्याइदिएकै थियो । त्यो भने पर्दैन थ्यो भन्दै स्वीकारी । उनीहरुले जीवनभरीका सपना बुन्न भ्याए । बिहे गर्ने मिति तोके र बिहेपछि गर्नुपर्ने केही गोप्य क्रिया गर्न पनि पुगे ।
जाले रुमालमाथि फूर्का थपिदिए नानीले यो पाली । त्यहीँ पूmर्का घाँटीमा बाँधेर फेरी परदेशीए शिरिषे । खुम्बुमा ढुंगा फूटाउने देखि लिएर चर्पीमुनी पतकर हाली तयार पारिएको मल बोक्ने र एभरेष्ट वेसक्याम्पबाट ड्रम बोकेर नाम्चेसम्म ल्याउने काम गरे उनले यो एक वर्षमा । यी कामहरुमा बढी पैसा कमाइन्छ भन्ने खुम्बु जाने प्रत्येकलाई थाहा छ । काम गर्ने र पैसा बचाउने ध्याउन्नमा लागे उनी, लाग्नु पनि थियो नै, नानीले उनैले लगिदिएको फोनबाट फोन गरेर खुसीको कुरा वताएकै थिई । मंसिर काटेमा समाजले कुरा काट्न थाल्ने हुनाले मंसिर नकटाउने वाचा लिइसकेकी थिन् ।
पुरानो सल्लाह अनुसार समयमै घर फर्किए । घर फर्केर पुरानो योजना पुरा गर्न थालियो । शिरिषेका काका र नानीको मामा दुई कठुवा रक्सी लिएर नानीको घर पुगे । पारुहाङ र सुम्नीमाका कुरादेखि सृष्टि चल्ने कुरासम्म गरेर अन्तमा तपाईंको घर आँगनमा फुलेको फुल हाम्रो भमरासरी छोराले लौ मन पराएछ माग्नु पो आयुङसम्म पु¥याउँदा नानीले चल्लाको माऊलेजस्तो भूईं कोट्याएर धुलो र दुलो बनाइसकेकी थिइन् । यो संकेतले कोही थप कोही केही बोल्नै परेन ।
बीस वर्ष पुग्न एकवर्ष बाँकी छदै विहे गरेका शिरिषेको पाँच वर्षभित्र तीन बच्चा र थपिने क्रम देखियो । यो बिचमा थुप्रै पटक उनी पुगे उही परिचित खुम्बु उपत्यका । मानिसले गर्ने, मेसिनले गर्ने, जनावरले गर्ने सब काम गर्न भ्याए । फरक यति भयो पहिलेजस्तो मनग्ये तरिकाले परदेश बसीराख्न सकेनन् । बढीमा दुई महिना मात्र बस्न सके । ज्यानमात्र बल्ल बचाएर कमाएको पैसाले गाउँमा एउटा सामान्य बासस्थान खडा गरे । छिमेकमा नाघी भ्याउनै परो, विहेवारी धाउनै परो । यस्तैमा उनी पेशेवर गाउँले पुरुष बने । कुनै समय कक्षा प्रथम मात्र भएका शिरिषेले आफ्ना बालच्चालाई स्कुल पढाउन निकै संघर्ष गर्नु प¥यो ।
एक दिन निदाउनु अघि शिरिषेले आफ्नो जीवनलाई राम्रैसँग फर्केर सोँचे । ऊ कक्षामा प्रथम भएको वेला दोस्रो, तेस्रो तथा पास मात्र हुनेहरु कोही लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिरमा, कोही नेपाली सेनामा, कोही शिक्षक, कोही कता कोही कता, त्यसैगरी कोही भने ऊ जस्तै । समग्रमा उसलाई खुशी लागेन, प्राय दौँतरीहरु विए, एमए पढेको सम्झेपछि । त्यसको विहानै शिरिषे सापटी लिएको केही खर्च र बाटोमा खाने भुटेको मकै र भट्मास बोकेर नाम्चेतिरै लागे किनकी उसँग पाँच डलरको नोटमात्र बाँकी थियो ।